निबंध "म कसरी मेरो जाडो बिदा बिताए।" स्कूल निबन्धहरू
सेन्ट - पीटर्सबर्ग - ठूलो अवसर को शहर! र अझै पनि धेरै वफादार आमाबाबुले। यसलाई धन्यवाद आफ्नो मद्दत गर्न, जादुई दुनिया खुलेको छ को इस्टोनियाली राजधानी।
Solemn परिवारमा जब indescribable आनन्द कस्तो स्कूल बिदा गर्न एउटा टिकट सम्मानित छ - जाडो सप्ताह इस्टोनिया मा आयोजित गरिनेछ! किनभने बिना एक "ट्रिपल" एक चौथाई भन्दा बढी।
विषय "शीतकालीन ब्रेक" मा एक निबंध तपाईं पर्यटकहरु र केही यसलाई सम्झना छैन लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र रोचक ठाउँहरू भ्रमण को लागि विश्वव्यापी नेटवर्क जाँच्न किनभने मौलिक आवश्यक धेरै लामो रात, म सुत्न सक्दैन भन्ने तथ्यलाई सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
कि यात्रा सामान्यतया एक सुखद भ्रम मा ठाउँ लिन जो आउँदै दिन, को लागि निर्धारित छ त जाडो बिदा बारेमा कथा जारी गर्न सकिन्छ। कुनै पनि यात्रा अघि आवश्यक वस्तुहरूको सूची बनाउनु हुँदैन। महिनामा जाडो बिदा एक झोला, न्यानो लुगा र अपरिचित ठाउँमा नेभिगेसन संग फोन बिना गर्न सक्नुहुन्न (संवाददाता कार्ड लेख्न छ)।
त्यसपछि ठूलो दिन आए!
लामो प्रतीक्षा भ्रमण प्रारम्भिक बिहान एक जागा-अप कल सुरु। आधिकारिक आउन पनि जाडो बिदा। यो सबै भन्दा राम्रो सम्झनाहरु को छ, किनभने बिल्कुल कुनै कठिनाई बनाउन गर्दैन एक योजना यस्तो एउटा निबंध लेख्नुहोस्।
फोन को सुखद माधुर्य आए - ओपरेटर ट्याक्सी घर सम्म झिकेर कि रिपोर्ट। तपाईं न्यानो कार मा सुत्न सक्नुहुन्छ किनभने छोटो समयको लागि, प्रिय आमाबाबुले बिताएको सर्दी बिदा बारेमा कथा, अवरोध हुन सक्छ। जब सबै सुन्दर भ्रमण बस मा लोड छ अप एक जागा।
को यात्रा को शुरुवात
जाडो बिदा ... छोटो निबंध सबै बढ्तै सबै भावनाहरू व्यक्त गर्न सक्दैन। ससेज संग र बिना स्वादिष्ट स्यान्डविच, साथै तातो चिया को एक ठूलो संख्या अवशोषित गर्न लगभग सबै तरिका हो।
शक्तिशाली बस रूसी सीमाना तिर सजिलै सवारी, र कठोर इस्टोनियाली सीमाना गार्ड तीन पछि र आधा घण्टा नार्भा को शहर नजिकै एक चेकपइंट मा कागजातहरू समानुक्रमित।
सबै जाँच विषय "शीतकालीन ब्रेक" मा काम इस्टोनिया मा जा गरिएको छ, सफल छन्।
एक सानो स्वतन्त्रता को बीस-चार वर्ष (एक सय र तीस-दोस्रो संसारमा क्षेत्र द्वारा ठाउँ) संसदीय गणतन्त्र पहिचान परे परिवर्तन भएको छ - पैसा को पूर्ण विद्युतीय परिसंचरण ल्याइयो, उच्च गति इन्टरनेट असीमित पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्। इस्टोनिया ईयू, नाटो, को सेन्जेन सम्झौता पूर्ण सदस्य भए। नागरिक धेरै आफ्नो भाषा, पहिचान र संस्कृति सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ।
त्यसैले, हामी मेरो जाडो बिदा कसरी खर्च गर्ने निबंध "जारी। इस्टोनियाली अध्याय शहर देखि पाँच किलोमिटर बारेमा शान्त, सहज होटल सुरु। त्यसपछि छोड्न कुराहरू पर्यटकहरु खुवाउन र आधुनिक ट्राम जहाँ पैदल भ्रमण तय गरिएको छ राजधानी को केन्द्र, गेष्ट वहन।
निबंध "कसरी म इस्टोनिया मेरो जाडो बिदा बिताए।" "पुरानो टाउन" को टाउको
पुरातन भवन आधुनिक भवनहरु र व्यापक पक्षको पृष्ठभूमि मा धेरै फरक छ। साँघुरो सडकमा र टावर विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश छन्।
तर वर्ष पहिले सबै नै, साथै धेरै सयौं। यो स्थान मान्छे भरिएको छ - तर अब यो आधुनिक फोटो र भिडियो उपकरण संग स्थानीय र पर्यटक छैन।
एक अद्वितीय टाउन हल, केवल एक युरोप को यो भाग मा संरक्षित छ - पृष्ठभूमिमा खडा जो भवन, बिल्कुल सबै फोटो खिंचवाने। पूरा तिथि चौधौँ शताब्दीमा -primerno। त्यहाँ stately मानिसहरू जो शहरको जीवन विषयमा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू निर्णय बसे।
अब यो उत्सव र receptions आयोजित। र कहिलेकाहीं भवन, समकालीन चित्रकला को एक प्रदर्शनी को तल मा। यो छ जो सबै स्पष्ट एक धेरै peculiar तस्वीर छ। अझै पनि, यो लेखक दर्शक गर्न व्यक्त गर्न खोजिरहेका थिए के अनुमान गर्न रोचक थियो।
शीर्ष बिन्दु सही ढंगमा संकेत जो हल फलक स्थित छ हावा को दिशा आनन्द र onlookers-भ्रमण को बासिन्दा मा।
यहाँ एक फार्मेसी संग्रहालय छ। अचम्मको कुरा, सायद, भावना जब तपाईं आवश्यक औषधि लागि भवन आउन र onlookers को भीड वरिपरि हिंड्न र पुरानो मापनहरू र बैरल मा ताक। गाइड ध्यानपूर्वक यो वा त्यो विषय के गठन गर्न बताउँछन्, र यो उनको हात किन लिन सक्दैन। वातावरण एकदमै रमाइलो र असामान्य अराजकता छ।
समय अझै उभिए
यो पुस्तिका साँघुरो घुमावदार सडकमा मार्फत दुई घण्टा भन्दा बढी जान्छ। तर पनि यो पूर्णतया समय एकता अनुभव गर्न पर्याप्त छ। यसलाई यहाँ रोकियो। र यो सम्भव थियो भने, एक दैनिक आधार मा पर्यटक समूह प्रत्येक सदस्य लुकेका कहीं यहाँ प्राचीन रहस्य छोयो थियो। यो बिन्दुमा, एक्लै मा राम्रो पैदल ब्रह्माण्डको को रहस्यहरुलाई pondering, र एक ठूलो, हल्ला कम्पनी, भवदीय खुसी जीवन छ।
व्यापारीहरु स्मृति चिन्ह, धेरै धेरै छन्। तर तिनीहरू बिल्कुल को टुकडी को कुल समय हस्तक्षेप छैन, आँखा पकड छैन। पनि विपरीत - धेरै मधुर स्वर सडक bustle मा फिट।
इस्टोनिया - एक उत्तरी देश, बलियो हावा द्वारा Blown। यो फर कोट, पन्जा र अन्य न्यानो कुराहरू धेरै त्यहाँ बेचिएको छ आश्चर्यजनक छैन त्यसैले छ।
सबैलाई स्थानीय Fauna विभिन्न प्रतिनिधिहरु को तस्वीर संग टोपी साँच्चै मनपर्छ। त्यसपछि तुरुन्तै तिनीहरूलाई को एक किनेको। र यो - फ्रिज मा चुम्बक।
गाइड, को पाठ्यक्रम, रूसी बताइएको छ। तर तेलिन को लगभग सबै बासिन्दा हाम्रो भाषा पोख्त छन्। बारम्बार बाटो देखाउन अनुरोध, र कुनै एक इनकार। त्यसको विपरीत, सबै साँच्चै मदत गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। र कहिले काँही, पनि एक हात ले र सही ठाउँमा discharged।
त्यसपछि तपाईं एउटा एकदमै रोचक र रंगीन महिला छ जो स्थानीय रेस्टुरेन्ट एक, मा स्वादिष्ट खान सक्छ। त्यसपछि थप अध्ययन केन्द्र मा जानुहोस्। साँझ चुपचाप ढोंगी। पुरानो शहर लोभ्याउने को गहिराइमा देखि हँसिलो संगीत सुने।
पनि नेत्रहीन यो सडकमा मानिसहरूको धेरै बढी हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यो दिन एक लोकप्रिय तिहार चल्छ गर्न - कारण सामान्यतया धेरै सरल छ। क्षेत्र मा दृश्य सेट। कलाकार अक्सर प्रत्येक अन्य प्रतिस्थापन गर्नुहोस्। संगीत को शैलीहरू पूर्ण बिभिन्न सुनिन्छ। को mournful, हृदय-rending लोकगीत रूपांकनों देखि, एकदम आधुनिक रक गर्न।
समय wafting आधार मा, भीड राष्ट्रिय पोशाक मा कलाकार को मुख बाट आउँदै हरेक ध्वनि पक्रने, मौन हुन्छन्। कि, फड्को stomps, बिजुली गिटार को गर्जन अन्तर्गत आफ्नो हात claps। दृश्य मा बिश्रामको समयमा त्यहाँ एक पोटिलो, balding नेतृत्व छ। एक अविश्वसनीय हास्यास्पद कथा (एक बिट असहज तपाईं भाषा थाह हुँदा, तर वरिपरि शाब्दिक निष्कपट हँसी भरिएको मान्छे) र प्रतियोगिताहरु धारण बच्चाहरु बीच बताउँछ। हारे र disgruntled हुँदैन - सबै स्वादिष्ट पुरस्कार को एक भाग प्राप्त।
जब सबै अन्तमा स्थिर थियो, तपाईं निकटतम रेस्टुरेन्ट फेरि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। तातो लसुन सस - यस समयमा मालिक आफ्नो हस्ताक्षर पकवान प्रयास गर्न प्रस्ताव गर्नेछ जो एक अग्लो मान्छे, धेरै नै विनम्र र सहयोगी हुन सक्छ। बस yum!
सबै अद्भुत छ। पनि unloved मसालेदार खीरे यहाँ विशेष गरी स्वादिष्ट।
न्यानो राख्ने क्रममा, मालिक तातो जाँड को एक स्वाद प्रदान गर्दछ। दालचिनी बस पागल र चाँडै शरीर स्वादिष्ट, सुगन्धित तरल भरिएको छ को गन्ध।
यो पुरानो शहर छोड्न समय आउँछ। यो एक आधुनिक शहर को सडकमा मार्फत एक सानो पैदल हुन सक्छ। तर प्रभावशाली देखेर पछि सपिङ्ग मल को एक ठूलो संख्या।
तपाईं पनि सुपरमार्केट भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ र शहर बस मा फिर्ता होटल लाग्यौं।
तेलिन - संग्रहालय धेरै संग शहर। निम्न दिन तपाईं धेरै ऐतिहासिक स्मारक भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। निबंध केवल आफ्नो प्रदर्शन आधारित, "म मेरो जाडो बिदा कसरी खर्च" लिखित सकिन्थ्यो। तर यी भावना आफूलाई मात्र महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
निबंध "म मेरो जाडो बिदा कसरी खर्च" रमाइलो स्याड टिप्पणी संग र एकै समयमा समाप्त हुन्छ। तेलिन - तपाईं स्कूल वर्ष को अन्त परिपूर्ण गर्न हरेक प्रयास गर्नुपर्छ ताकि, फेरि फेरि भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ कि शहर।
देशमा - यो के हो?
एक extracurricular पढाइ के हो? क्लास3सन्दर्भ
सबै शहर कामचट्का पेट्रोपाभ्लोस्क-Kamchatsky, Yelizovo, Vilyuchinsk
एक गैर-न्यूटोनियन तरल पदार्थ के हो? उदाहरण र प्रयोग
Tuber - एक ... बोट भूमिगत परिमार्जन अंग
समीक्षा gynecologists: "Laktatsid" हो। स्त्री स्वच्छता उत्पादनहरु
केटाको लागि सुन्दर उपनाम - कसरी छनौट गर्ने हो? मानिसको सुन्दर उपनामहरू के हो?
कसरी घर मा साबुन बनाउन - केही सरल र किफायती सिफारिसहरू।
मूसा Dzhalil: बच्चाहरु को लागि जीवनी र छोटकरीमा काम
Schoolchildren लागि Sladkova कथाहरू
म गर्भावस्था को समयमा "Kagocel" पिउन सक्नुहुन्छ? "Kagocel": गर्भावस्था मा contraindications
प्राविधिक उपकरणहरूको औद्योगिक सुरक्षा विशेषज्ञता कागजात र सिफारिसहरू को सुविधाहरू
अभिनेताहरु, उत्पादन, प्लट: फिल्म "सुनको कम्पास" को समीक्षा